Hogaamiyeyaasha Islaamka oo maanta kulan ka yeelanaya go’aankii Donald Trump – Radio Muqdisho
Hogaamiyeyaasha Islaamka oo maanta kulan ka yeelanaya go’aankii Donald Trump
Waxaa maanta ka dhacaya magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga Shir degdeg ah oo ay isugu imaanayaa dalalka Islaamka kaasi oo looga hadlayo go’aankii Donald Trump uu Caasimada Israa’iil ugu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mowliid Oglo ayaa sheegay in aysan suuragal aheyn in laga aamuso dulmiga ay Israa’iil ku heyso Falastiin, isaga oo balan qaaday in Shirka ay kasoo bixi doonto fariin xooggan oo la xiriirta Qudus.
Marka: Dhagarqabe argagixisada u qaabilsanaa miinooyinka oo gacanta lagu dhigay
Madaxweynaha Galmudug oo dib ugu laabtay Dhuusamareeb
“Qaar ka mid ah Dowladaha Carabta ayaa si daciif ah oga fal celiyay arrintaan, sababtoo ah waxa ay qaarkood walaac ka qabaan Mareykanka” ayuu yiri Wasiirka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in Shirkaan uu noqon doono Turjumaad wax ku ool ah oo Shacuubta Carabta iyo Islaamka ay kaga horimaanayaan talaabada Donal Trump.
Shirkan ayaa la filayaa in aysan u kala harin Hogaamiyaasha dalalka Carabta iyo Islaamka, waxaana Soomaliya oga qeybgalaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed C/llahi Farmaajo iyo Wafdi uu hogaaminayo.
Caro adag oo dunida Muslimka ah ayaa ka dhashay qaraarkii Madaxweynaha Mareykanka uu ku sheegay in Qudus ay tahay Caasimada Israa’iil.
Daawo Sawirro+Soomaliya oo dib u soo nooleyneysaa Dhaqanka & Dalxiiska si dalka nabad iyo horumar loogu soo dabaalo
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa caawa waxa ay howgal ka sameyeen magalada Marka ee Gobolka Shabeelaha Hoose Howlgal ka ayaa...
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug, mudane Axmed Cabdi Kaariye, iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dib ugu laabtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamarreeb,...
Madaxweynaha Dalka oo qaabilay Guddoomiyaha Golaha Shacabka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaabilay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed...
Guddoomiye Aadan Madoobe iyo Amb. James Swann oo ka wada hadlay isbedelka dalka ka dhacay
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo maanta kulan la qaatay Wakiilka Xog-hayaha Guud...